ဓမ္မာနုပဿနာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: ဓမ္မာနုပဿနာ
သတိပဌာန်လေးပါးကျင့်သုံးခြင်းခြင့်နိဗ္ဗာန်စံခြင်း နိဗ္ဗာန်သွားရာ လမ်းခရီးမှာ ၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်ပင် ဖြစ်သည်။ ၀ိပဿနာ၌ သတိပဌာန် လေးမျိုး ကာယနုပဿနာ ဝေဒနာနုပဿနာ စိတ္တာနုပဿနာ ဓမ္မာနုပဿနာ ဟူ၍လေးမျိုးရှိရာ ကိုယ်ကြိုက်သည့်နည်းနှင့် ကိုယ်ကြိုက်သလို ကျင့်ပြီး နိဗ္ဗာန်သွားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ ဓမ္မာနုပဿနာသည် လွန်စွာ သိမ်မွေ့သဖြင့် Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဓမ္မာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဓမ္မာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
ဟုတ်ရာမှန်ရာအကျိုးရှိရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ ဟုတ်ရာ မှန်ရာ အကျိုးရှိရာကို ပြောနိုင်ခွင့်ရှိလေသည်။ မဟုတ်ရာ၊ မမှန်ရာ၊ အကျိုးမဲ့ရာကိုမူ မပြောရချေ။ ဟုတ်မှန်နေလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ ပြောပိုင်ခွင့် ရှိလေသည်။ သုံးလောကထွတ်ထား မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင်သည်ပင်လျှင် ဟုတ်ရာ၊ မှန်ရာ၊ အကျုိးရှိရာကို မိန့်တော် မူဖူးလေသည် – “ငါအမြတ်ဆုံး၊ ငါအကြီးအကဲဖြစ်ဆုံး၊ ငါအအောင်မြင်ဆုံး” ဟူ၍လည်းကောင်း “တဏှာလက်သမား ယခုအခါ ခန္ဓာအိမ် မဖွဲ့နိုင်တော့ပြီ၊ နောက်ဘ၀ မရှိပြီ” ဟူ၍လည်းကောင်း ကြွေးကြော်တော် မူခဲ့ဖူးလေသည်။ ရဟန္တာများသည် အသီးသီး ဥဒါန်းကျူးတော် မူခဲ့ကြလေသည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ရဟန္တာ, ဝေဒနာနုပဿနာ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
Posted on May 4, 2011 by chitnge
ယနေ့လူငယ်နှင့်ဝါဒမှိုင်း သစ္စာဝါဒီများ – တရားဆိုတာ မသေမချင်း လုပ်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် – ဒါဟာ ဆရာမြတ်ကြီးက မိန့်မှာတော် မူခဲ့တဲ့ ဆရာမြတ်ကြီးရဲ့ စကားပါပဲ။ ဆရာမြတ်ကြီးရဲ့ စကားကိုတော့ ကျွန်တော်က ဦးထိပ်မှာ ပန်ဆင်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀ဟာ ဆရာမြတ်ကြီးကြောင့် မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကျ အဆိုအဆုံးအမတွေ ရတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလိုပဲ ယုံကြည်တယ်။ ကျွန်တော် နှလုံးလည်း သွင်းတတ်တယ်။ နုပသနာ လေးမျိုးစလုံး ကျွန်တော် ရှုတတ်တယ် – ရှုတတ်တာတော့ ရှုတတ်တာပဲ။ ဒီခေတ်လူငယ်တွေက ဒီလို ပြောတာလေးတွေကို … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, ဆရာမြတ်ကြီး, ဓမ္မာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်, သာသနာ, ဝေဒနာနုပဿနာ	| Leaveacomment
Posted on April 23, 2011 by chitnge
နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် သစ္စာဝါဒီများ .. .. နိဗ္ဗာန်ကို ဘယ်အရွယ်က စတင်မြင်ဖူး ပါသလဲ ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး ပေါ်လာတယ် – ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မှတ်မထားပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက် ဆရာမြတ်ကြီးကို ဖူးတွေ့ရတော့ စပြီးကျင့်လိုက်တာ (၃၅)နှစ် ၀န်းကျင်လောက်ပဲ နေမှာပါ။ ငါးနှစ်လောက် ကျင့်တဲ့အခါမှာ မြင်သွားတဲ့သဘော ပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်မြင်ရတော့ တော်တော်လည်း အံ့သြတယ်။ ကျွန်တော် ရိုးရိုးဝန်ခံရမယ်ဆိုရင် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ – “ဘာမှမရှိဘူး” လို့ ထင်ခဲ့တာပေါ့နော် .. .. … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, ဆရာမြတ်ကြီး, ဓမ္မာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်, ဝေဒနာနုပဿနာ	| Leaveacomment
ကမ္ဘာသိစေချင် .. ..၃
ကမ္ဘာသိစေချင် .. .. အပိုင်း(၃) ကျွန်တော်တို့ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတာက သစ္စာတရားရဖို့အတွက် နည်းလေးမျိုးပါပဲ။ ဆရာက ကျွန်တော်တို့ကို နည်းလေးမျိုးကို ရိပ်မိအောင် သင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝေဒနာနုပဿနာရယ်၊ စိတ္တာနုပဿနာရယ်၊ ဓမ္မာနုပဿနာရယ် ရှုပါတယ်.. .. ကာယနုပဿနာကတော့ understood ပေါ့လေ .. .. (ဒါကတော့ သိပ်ကြီးကျယ်တဲ့ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေ ရှုတယ်ဆိုတော့ ….)ကျွန်တော်တို့က ဝေဒနာနုပဿနာကို ပထမရှုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ဒါကို ရင်ဆိုင်နိုင်တယ် .. .. တကယ်လို့ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ, ဝေဒနာနုပဿနာ	| Leaveacomment
တရားအားထုတ်လိုလျှင် .. .. တရားအားထုတ်တဲ့အခါ အသေးစိတ်နဲနဲ ပြောပြချင်ပါတယ် .. .. တရားအားမထုတ်မီ ဘုရားကို ရုပ်နာမ်လှုတာကောင်းပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ကိုယ်တွေးချင်ရာ မတွေးပါဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ .. .. အတွေးတွေပေါ်ရင် အပျက်ရှုမယ်ဆိုတဲ့ အဓိဌာန်ပါပဲ။ ဒီတော့ ရုပ်နာမ်ကို ဘုရားလှုလိုက်တော့ ကိုယ်က Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဓမ္မာနုပဿနာ	| Leaveacomment